Fitbit wuxuu soo bandhigayaa Charge 2 iyo Flex 2 | Wararka IPhone
Fitbit wuxuu soo bandhigayaa Charge 2 iyo Flex 2 cusub
Ignacio Sala | | Apple Watch, Tartanka
Marka loo eego tirakoobyadii ugu dambeeyay ee aan daabacnay toddobaadyo ka hor, Fitbit hadda waa shirkadda ugu weyn ee soo saarta agabyada lagu qiyaaso suuqa waxaa ku xiga Xiaomi. Inta badan cilladda ay Fitbit ku jirto booska koowaad waxaa dhiirrigeliya aalado iyo moodello fara badan oo ay shirkaddu hadda ku bixiso suuqa, aaladaha aan ka heli karno qiimo ballaaran oo daboolaya dhammaan baahiyaha isticmaalayaasha. Iyo in la balaadhiyo aaladaha balaaran ee laga heli karo suuqa, shirkada ayaa hada soo bandhigtay labo nooc oo cusub: Fitbit Charge 2 iyo Fitbit Flex 2.
1 Fitbit Beddel 2
Fitbit Beddel 2
Labadan moodel ee cusubi waxay ku jihaysan yihiin qaybta isboortiga iyo dhaqdhaqaaqa jirka, halkii ay ka ahaan lahaayeen moodello kale oo loogu talo galay in la xidho, sida haddii ay yihiin aaladda casriga ah ee casriga ah. Fitbit Flex Charge 2 wuxuu na siinayaa shaashad ka balaaran qaabkeedii hore marka lagu daro bixinta muuqaal la mid ah smartwatches-ka hada laga heli karo suuqa, inkasta oo cabirkoodu yaryahay. Maxaa intaa dheer wuxuu leeyahay qalab GPS ah iyo dareenka garaaca wadnaha kaas oo aan ku xakameyn karno dhaqdhaqaaqa jirkeena marwalba. Waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan qaabeyno qaabka tirakoobka iyadoo la adeegsanayo xargaha kala duwan.
Laakiin sidoo kale waxay awood u leedahay inay ka hesho ogeysiisyada taleefannada casriga ah, iyo sidoo kale fariimaha, wicitaanada, qoraalada kalandarka. Sida macquul ahaan ah iyo dhanka bari ee ku wajahan dunida isboortiga, waxay u adkeysataa biyaha iyo dhididka laakiin kuma haboona howlaha dhaqdhaqaaqa isboortiga ee biyaha hoostooda. The Fitbit Charge 2 ayaa suuqa soo gali doona bisha Sebtember ee soo socota iyada oo lagu qiimayn doono 159,95 euro.
Fitbit Flex 2 wuxuu na siiyaa shaqooyin iyo astaamo ka yar Fitbit Charge 2, laakiin wuxuu ku darayaa kuwa kale sida iska caabbinta biyaha, isagoo awood u leh inuu iska caabiyo moolka ilaa 100 mitir. Si ka duwan qaabkii hore, LED-yada kala duwan ayaa noo soo sheegi doona macluumaadka u dhigma wakhti kasta oo arki doona horumarkayaga. Batariga aaladan wuxuu awood u leeyahay inuu gaaro 5 maalmood marka lagu daro inuu na ogeysiiyo marka aan helno wicitaanada ama nooc ka mid ah ogeysiinta. Fitbit Flex 2 ayaa suuqa soo gali doona bisha Oktoobar qiimo dhan 99,95 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Fitbit wuxuu soo bandhigayaa Charge 2 iyo Flex 2 cusub
Apple waxay diyaarineysaa hagaajinta kumbuyuutarrada iPad iyo Mac